गतिलो तयारीबिना नमोबुद्ध महोत्सव सुरु ,स्थानिय भन्छन–“हामीलाई थाहा छैन”(भिडियोसहित हेर्नुहोस्) – NamoBuddha Khabar
गतिलो तयारीबिना नमोबुद्ध महोत्सव सुरु ,स्थानिय भन्छन–“हामीलाई थाहा छैन”(भिडियोसहित हेर्नुहोस्)
बिहिबार, पौष २६, २०७५ | १७:५३:२५ |
भकुण्डे–आबश्यक तयारी बिना विहिबारदेखी काभ्रेको नमोबुद्ध नगरपालिकास्थीत भकुण्डेमा प्रथम नमोबुद्ध महोत्सव सुरु गरिएको छ । नमोबुद्ध नगरपालिकाको सहयोगमा नमोबुद्ध उद्योग वाणिज्य संघले माघ ६ गतेसम्मका लागि आयोजना गरेको महोत्सवको पहिलो दिनले यस्तै छनक देखायो । चोकमा निस्कीएको सानो झुण्डजस्तो देखिएको र्यालीमा स्थानियहरु खासै देखिएनन् ।
समावेशी नगर बनाउने परिकल्पनाका साथ अघि बढेको नमोबुद्ध नगरपालिकाले सहयोग गरेको महोत्सवको र्यालीमा खास समुदायको मात्रै झाँकीहरु प्रधान थिए । थोरै संख्यामा भएपनि पञ्चेवाजा,चुट्के खैंचडी भजन सहित कार्यक्रमस्थल आईपुगेका झाँकीलाई बेवास्ता गर्दै आयोजकले ठुलो साउण्ड सिस्टममार्फत नेपाली चलचित्रका आईटम गितहरु सुनाईरहे,आफ्नो बेवास्ता गरिएपछि एकछिन खैंचडीमा चुट्का भजन सुनाउँदै टोली अक्क न बक्क भएर लाखापाखा भयो ।
एक दर्शकले भने –“उद्घाटन हुने टुंगो छैन जस्तो छ,मान्छेले सुनोस् या नसुनोस् स्टेजबाट आईटम गितहरु सुनाईरहेछ,अचम्म छ बा ।” घाम डुब्नै लाग्दा लाजमर्दो दर्शक उपस्थितीमाझ बल्ल महोत्सवको उद्घाटन गरियो ।
स्थानियको प्रश्न -कसरी बन्ला समृद्ध नगर ?
महोत्सव बजारको सानो बस्तीमा मात्रै सिमित गर्ने आसय देखियो, सानो बजारमै करिब १० देखी ५० मिटरको दुरीमा खर्चिलो गेट बनाएर आँगनभरीको मात्रै चुरीफुरी भन्ने देखाउन खोजेको भान मिल्छ । खासै गतिलो तयारी देखिएन आयोजकको । स्थानिय संघसंस्थासँग सहकार्य नगरिएकोले सहभागि केहिले आपत्ति जनाए । कार्यक्रम स्थलछेउको बाटो हिड्दै गरेका कानपुर तेमालका बीरसिं तामाङले भन्नुभयो–“हामीलाई त केहि थाहा छैन,म त घर बनाउन सिमेन्ट लिन मात्रै बजार झरेको,अब फर्किहाल्छु ।” आफ्नै नगरमा भएको कार्यक्रमको बारेमा थाहा नपाउनुमा आयोजकको कमजोरी ठान्नुहुन्छ बीर सिं ।
“खै के कुन्नी ! कोही कसैको स्वार्थ पुरा गर्न गरेको होलानी महोत्सव,हामीलाई त चासो पनि छैन,भन्ने बेला स्थानिय उत्पादनको प्रवद्र्धन,कला संस्कृतिको संरक्षण भन्छन्,ठग्ने त होलान्नी,यहाँ पनि नगरपालिका टुलुटुलु हेरेर त बस्ने होला अनि बन्ला समृद्ध नगर ।”–भकुण्डे बजारमै मजदुरी गर्दै आएका ४७ बर्षिय जयमान तामाङको पनि असन्तुष्टी यस्तै छ ।
यत्तिबेला गाउँ गाउँमा सानातिना संघसंस्थाहरु नभएका हैनन्,सामुहिक सपनाका लागि लाग्ने हो भने उनिहरु नैतिक,भौतिक,आर्थिक सहयोग गर्न हरदम तयार हुन्छन् । तर यो महोत्सव त यस्तो देखिदैछकी यसको ठेक्का कोही सिमित खास समुहलाई दिईएको छ,उसको मात्रै सहभागिताले महोत्सव भव्यताका साथ सम्पन्न हुन्छ । बिचैमा विपी राजमार्गसहितको शहरमा महोत्सव खुबै चल्ने दम्भले यसअघि भकुण्डे महोत्सवको नाममा भएको दुईपटकको महोत्सवले हावा खाएको सायद नमोबुद्ध महोत्सव आयोजकलाई थाहा रहेनछ ।
त्यत्ति हुदा हुदै पनि यो महोत्सवमा समेत उचित खानेपानी र शौचालयको व्यवस्थापन गतिलो छैन,स्टलहरुमा मौलिक चिज भन्दा पनि बाहिरी बस्तुलाई महत्व दिइएको छ । भरिएका केहि स्टलहरुले बाहिर बजारमा भन्दा कयौं गुणा महंगोमा बिक्री गरिरहेका छन् । लाग्छ २,४ जनाबाटै मनग्गे ठग्न पाए पुग्छ ।
महोत्सवको उद्घाटन समारोहको प्रमुख अतिथि बन्नुभएका नगर प्रमुख टिपी शर्माले बरु महोत्सव सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो । समावेशी,समृद्ध नगर निर्माणको परिकल्पनाका साथ अघि बढेको नगरमा आयोजना गरिएको महोत्सवको आयोजकबाट भएका यथेष्ट कमीकमजोरीलाई कसरी लिनुभएको छ,यि कुरा भोलीका दिनमा आउनेनैछ ।
स्थानिय सञ्चार माध्यमलाई बेवास्ता
महोत्सव भन्ने वित्तिकै थोरै समयको सोचविचार,थोरै लगानी,जनशक्ति,स्वयम्सेवी,सहयोग तथा व्यवस्थापनबिना सम्भव छैन । महोत्सवप्रति जनसहभागिता बढाउन,यसको लाभ फिजाउँन र यिनको फाईदा स्थानियले प्राप्त गर्ने वातावरण बनाउन मुख्य सहयोग सञ्चार माध्यमको रहने गर्दछ । तर यो महोत्सवमा स्थानिय सञ्चारमाध्यमलाई पुरै वाईपास गरिएको देखिन्छ ।
हजारौं मजदुरहरुको रोजीरोटि खोसिनेगरी बन्द गरिदै गरिएको ईट्टा भट्टाको बिचैमा महोत्सव स्थल तोकिएको आयोजकले दुईचार जना कलाकारको अनुहार देखाएर टालटुले महोत्सव गरी पैसा कमाउने सोच बनाएको प्रष्ट हुन्छ केहि मिडियाकर्मीसँगको संवाद बुझ्दा ।
“अध्यक्ष ज्यु,नमोबुद्ध महोत्सवबारे पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिए राम्रो होलाकी” भनी केहिदिन अघि एक पत्रकारले राखेको जिज्ञासामा नमोबुद्ध उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष बासु नारायण श्रेष्ठले भन्नुभएको थियो–“यस्तो त हामीलाई केहि थाहा छैन,काभ्रेमा कत्ति रेडियो छन्,पत्रपत्रिका र अनलाईन छन् केहि जानकारी छैन,ज–जसले मलाई फोन गरेर सोध्छ उनिहरुलाई मैले भन्ने गरेको छु,सकेको सहयोग गर्नु,नाफा भएछ भने हेरौंला,यसै भन्न सकिन्न,विज्ञापनचाँहि नहाल्नु भन्दिन ।”
संस्थाको अध्यक्षको यस्तो कुराबाट पनि सहजै भन्न सकिन्छकी आयोजक महोत्सवबारे कत्तिको संबेदनशील र जिम्मेवार छन् भनेर ।
झण्डै चार दर्जन सञ्चारमाध्यम रहेको काभ्रेका २ जना पत्रकार मात्रै थिए महोत्सवको औपचारिक उद्घाटन समारोहको रिपोर्टिङमा । उनिहरु पनि आयोजकको निम्तोमा आएका थिएनन् ।
कार्यक्रम उद्घोषकले बेलाबेलामा भन्दै थिए–“हाम्रो आधिकारिक मिडिया भने काठमाण्डौंबाट आएको एविसी टिभि मात्रै हो,अरुले भिडियो,फोटो खिचेर सार्वजनिक नगर्नु,बिचार गर्नु अनलाईन् युट्युब तिर त्यस्ता फोटो भिडियो आयो भने बन्द हुन सक्छ ।” यसको मतलब नमोबुद्ध महोत्सव प्रवद्र्धन गर्ने जिम्मेवारी स्थानिय मिडियाको हुदै हैन,ठेक्का अरु कसैले लिईसकेको छ । यसबारे बुझ्न खोज्दा आयोजक नमोबुद्ध उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष श्रेष्ठको फोन उठेन ।
महोत्सवमा देखिएको एक दृश्य,जहाँ नेपाली चलचित्रका आईटम गित बजाईरहे,यो खैंचडी नाचको बेवास्ता गरियो,हेर्नुहोस् ।